Khetha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esisebenza ngamanzi esihambisana kakhulu nezindinganiso zokuphila zesimanje
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Khetha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esisebenza ngamanzi esihambisana kakhulu nezindinganiso zokuphila zesimanje
2020 / 10 / 26 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 4249 0
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sithatha umgwaqo wentuthuko yobungcweti
Enkambisweni yokwenziwa ngcono kwekhaya, impela kunamakhono amaningi, hhayi kuphela amazinga ekhwalithi yokuhlobisa, kepha futhi namakhono okonga imali. Abantu abaningi benze izibalo zobungcweti kulokhu, njengokuthi ungacabanga ukonga imali, nokuthi lapho ungeke ucabange ukonga imali, kungcono kakhulu. Lokhu ukukhetha okulethwa kubantu ngesipiliyoni sempilo. Lokhu kunjalo ngempela. Kungenzeka ukuphishekela ukuklama okuphezulu kakhulu futhi okuphelele. Kumele futhi kuhlanganiswe neqiniso ukufezekisa izidingo ezisebenza kakhulu. Ngasikhathi sinye, yinhle futhi ihlala isikhathi eside. Umpompi yindawo encane yokonga imali.
Indlu yokugezela kanye nekhishi yizindawo lapho kusetshenziswa khona ompompi, kepha umsebenzi ohlobene namanzi ugxila kwikhwalithi yangempela yezakhiwo kanye nezici. Ukukhetha ompompi bokugcina amanzi bakamuva kuyindlela enhle kakhulu yokukhetha futhi iyindlela esebenziseka kakhulu. Umpompi awukwazi ukugcina imali. Okokuqala, isetshenziswa kaningi. Umkhiqizo omuhle kakhulu kufanele ukhethwe ukuqinisekisa ukuthi awulungiswa njalo ukugwema ukuthinta ukusetshenziswa empilweni yangempela. Ngaphezu kwalokho, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kugxilwe kukho emanzini asekhaya futhi kufanele kube ngochwepheshe ngokwengeziwe. Ikhwalithi ukuphela kwendlela yokufeza izindinganiso ezingcono zokusebenziseka. Ukonga amanzi nakho kuyingxenye ebalulekile yemikhiqizo emisha esebenza ngezinto eziningi. Ngokusho kokukhethwa kwangempela, izici zomkhiqizo uqobo zisobala, futhi izindinganiso zokonga amanzi zifuna kakhulu, okungadingeki kuphela ukonga umndeni. Futhi kuyisidingo esibalulekile sokonga amandla avela endaweni ejwayelekile.
Ukuthatha umgwaqo wentuthuko yobungcweti, ompompi bemikhiqizo yenhlanzeko baningi ngokwengeziwe ekwakhiweni. Phakathi kwabo, ukwakheka kwemisebenzi eminingi uqobo kunezici eziqinile zobuchwepheshe futhi kuhlangabezana nezidingo zamazinga wokuphila wanamuhla. Ukuma okuhle, ukwakheka okuhle, nemisebenzi eminingi kuhlanganiswe kukodwa, okulungele impilo nokonga amanzi nokusebenza kahle.
Edlule :: Umkhiqizo wepayipi lokugezela kanye nokugcinwa kompompi wokugezela Olandelayo: Matte Black Donsela phansi Ikhishi ompompi
2021 / 01 / 10 1474
2021 / 01 / 10 1131
2020 / 12 / 21 5994
2020 / 11 / 19 5131
2020 / 11 / 19 4684
2020 / 11 / 18 4895